देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बामदेवको भित्री योजनाबारे चर्चित विश्लेषक डा. केसीको सनसनी खुलासा (भिडियो सहित)
डा.सुरेन्द्र केसी चर्चित राजनीतिक विश्लेषक हुन्। उनका विश्लेषण खरा हुन्छन् र उनलाई निडर र हक्की राजनीतिक विश्लेषकका रुपमा पनि चिनिन्छ। ताप्लेजुङमा जन्मिएका प्रोफेसर डा. सुरेन्द्र केसी करिब ४ दशकदेखि प्राध्यापन
ओलीले नबनाए यो देश अरु कसैले बनाऊन सक्दैन, ओलीलाई ५ बर्ष काम गर्न देउ (भिडियो सहित)
काठमाण्डौ । पंचायती व्यबस्थाको शुरुवातदेखि पंचायतको उत्कर्ष र अवसानको साक्षी हुन्- सुश्री भद्रकुमारी घले । जुद्ध शमशेरकी छोरी कमल राणालाई समेत माननीयको चुनावमा पराजित गरेर पंचायती ब्यबस्थामा चार चार पटक
कडा प्रश्न सोधेको भन्दै सञ्चारमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा टेलिभिजन कार्यक्रम नै बन्द ! (भिडियो सहित)
काठमाडौ । संच्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अपठ्यारा प्रश्न गरेको भन्दै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुदै आएको सिधा प्रश्न कार्यक्रम बन्द गर्ने आदेश दिएका छन् । कार्यक्रम प्रस्तोता राजु थापाले संच्चालन गर्दे आएको
भारतसँगको खुला सिमा बन्द गर्ने गृहमन्त्री थापाको उद्घोष (भिडियो)
गृह मन्त्रालय सरकारको वास्तविक मुहार मानिन्छ, यसर्थ कानुन कार्यान्वयन गराउने यो अड्डा सरकार सफलता, असफलताको पहिलो कडी पनि हो, रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे यता सुन तस्करीविरुद्धको अपरेसन,
‘नेपाली विरुद्ध अपराध गर्ने मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने ?’ : चित्रवहादुर केसी
अबको केहिदिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउदैछन्।मोदीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर विरोधका स्वरहरु सामाजिक संजालमा पोखिइरहेका छन्।अझ मोदीलाई जनकपुर र काठमाडौंमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कुरा सार्वजानिक भएपछि मोदी
केपी ओली लामो समय जेल बसेकै कारण आज हामीले खुला रुपमा बोल्ने, लेख्ने मौका पाएका छौ : संग्रौला
लेखक,साहित्कार,राजीतिक विश्लेषक हुन् खगेन्द्र संग्रौला। वामपन्थी विचारधारा बोकेका संग्रौला राजनीतिक तथा अन्य विभिन्न कुरामा खरो टिप्पणी गर्छन्।संग्रौलाका कतिपय टिप्पणी अशोभनीय र अपाच्य भन्दै आलोचना पनि हुने गर्छन्। सामाजिक संजाल ट्वीटरमा
मुलुकमा कायापलट ल्याऊने हो भने कुलमानको जस्तो क्षमता भएकालाई उचित जिम्मेवारी दिनुपर्छ : मुमाराम खनाल
रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेल चढ्दा हाम्रो फास्ट ट्याकको स्थिती के हुने हो ? पाँच बर्षमा त्यसका आधारभुत कुरा सकिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ।जुन हाम्रो गौरवको आयोजना हो। रेल आउने आशासँगै फास्ट ट्याक
‘अध्यक्ष छोड्दैनौं, फिप्टी–फिप्टी भन्दैनौं’ : माओबादी केन्द्र नेता देवेन्द्र पौडेल (भिडियो सहित)
एकिकृत पार्टीको सहअध्यक्ष भएपनी कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले लिएर पार्टी चलाउनु पर्छ। माओवादी नेता तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले माउण्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्दै उक्त कुरा बताएका हुन्। दुई बर्षपछि
‘ओलीको दोष छैन, लेखेर राख्नुस्- प्रचण्डकै कारण एकता हुँदैन’
दक्षिण एशियामा वंश राजनीति र सधै राजनीतिको केन्द्रमा रहने ‘पावर पोलिटिक्स’ को उत्तिकै चर्चा हुने गर्दछ । जसको समय-समयमा तिखो टिप्पणी हुने गर्छ । यस्तो ‘पावर पोलिटिक्स ‘ले मुलुकलाई कता
एमाले नेताको ६०–४० को कुराले केही हुँदैन, प्रचण्ड–केपीले मिलाउनुहुन्छ सबै : पम्फा भुषाल (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रिया लम्बिएको छ । पछिल्लो मंगलबार केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता पनि सहमतिमा टुंगिएन । यद्यपि नेताहरु एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुगिसकेको